Breaking : बेलायतमा ९० बर्षिया महिलाले लगाइन् पहिलो कोभिड–१९ खोप ! यस्तो देखियो असर – – AB Sansar
Breaking : बेलायतमा ९० बर्षिया महिलाले लगाइन् पहिलो कोभिड–१९ खोप ! यस्तो देखियो असर –
December 9, 2020 santoshLeaveaComment on Breaking : बेलायतमा ९० बर्षिया महिलाले लगाइन् पहिलो कोभिड–१९ खोप ! यस्तो देखियो असर –
बेलायतमा ९० बर्षिया महिलाले लगाइन् पहिलो कोभिड–१९ खोप ! देखियो यस्तो असर – लन्डन– बेलायतमा मंगलबार देशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान शुरु भएको छ । फाइजर–बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोभिड–१९ विरुद्धको खोप एक ९० वर्षीया हजुरआमाले लगाएर खोप अभियान शुरु भएको हो । मध्य बेलायतको कोभेन्ट्री निवासी ९० वर्षीया मार्गरेट कीनानलाई यो ऐतिहासिक खोप दिएर बेलायतमा खोप अभियानको औपचारिक शुरुआत गरियो । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
बेलायतले फाइजर–बायोएनटेकले उत्पादन गरेको खोपलाई औपचारिक स्वीकृत गरी देशव्यापी खोप अभियान शुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा ८० वर्षभन्दा बढी उमेर भएका, केएर होममा कार्यरत व्यक्तिहरु तथा स्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई यो खोप दिइने योजना बेलायत सरकारको छ विश्वभर १५ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लिइसकेको कोरोनाभाइरसबाट बेलायतमा पनि ६१ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । बेलायतमा १६ लाख व्यक्ति कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले खोप अभियान कोभिड–१९ विरुद्ध बेलायतको पहिलो र ठूलो अभियान रहेको बताउनु भएको छ ।
बेलायतको नियामक निकायले गत बुधबार मात्र फाइजरको खोपलाई अनुमति दिएको थियो । कतिपय वैज्ञानिक समुदायले बेलायतले अलिबढी हतार गरेको बताए पनि बेलायतमा सरकारको कदमलाई स्वागत गरिएको छ । बेलायतले हालसम्म ४ करोड डोज खोप खरिद गर्न फाइजरसँग सम्झौता गरेको छ । यसबाट करिब २ करोड मानिसलाई खोप दिन पुग्नेछ । पहिलो चरणमा करिब ८ लाख व्यक्ति खोपबाट लाभान्वित हुने बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यही डिसेम्बर महिनाको अन्त्य सम्ममा ४० लाख डोज उपलब्ध हुने अपेक्षा बेलायतको छ । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
फेसबुकमा माया बसेको प्रेमिको एउटा खु,ट्टा छैन भन्ने थाहा पाएपछी झन माया लाग्यो अनि घर छोडेर विवाह गरे ( भिडियो सहित)
टेलिकमको संविधान दिवस अफर, एक हजार एमबी डेटा उपलब्ध गराउने
September 19, 2021 Ab-संसार
जो’*डी नभएकाहरुलाई को’#रोना भा*’इरसबाट मृ’#त्यु हुने खत’*रा धेरै’